တရုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ် (ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးအေးဂျင့်)
တရုတ်ဝဘ်ဆိုက် (Hydrolysis agent)
21-04-06 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကပ်ရောဂါသည်ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောပစ္စည်းများနှင့်အများပြည်သူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရုံသာမကလူထုကို၎င်း၏မျက်နှာဖုံးများနှင့်အသုံးချခြင်းကိုစွဲမှတ်စေသည်။ တကယ်တော့ရက်ကန်းမဟုတ်သောအထည်များသည်သာမန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးမျက်နှာဖုံးများ၊ အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များတွင်အရေးကြီးသောအသုံးချမှုများရှိသည်။
ထုတ်ဖော်: ဘယ်လို antibacterial ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ကြသည်?
ကပ်ရောဂါပြီးနောက်လူတိုင်း၏ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများကိုလူတိုင်းသိနားလည်လာသည်။ မကြာခင်မှာပဲအများပြည်သူ၏အမြင်အာရုံတွင်ပacterိဇီဝဆေးများထွက်ပေါ်လာသည်။ antibacterial ထုတ်ကုန်များ၏အဓိက antibacterial ပစ္စည်းများတည်ရှိသည်! ဒီတော့ပantibိဇီဝဆေးကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ။ Langyi အိမ်ထောင်ဖက်အသစ် ...
ရောဂါပိုးမွှားမွှားတိုက်ဖျက်ရေးဖုန်းအိတ်များ - ပantibိဇီဝပိုးပလပ်စတစ်ကိုလူကြိုက်များသော application တစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝသည်လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ လူတွေကလက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါ်မှာမှီခိုနေကြတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများရှိဘက်တီးရီးယားများကိုလူအများစုကအလွယ်တကူလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ လေ့လာမှုအရလက်ကိုင်ဖုန်း ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပိုင်ရှင် ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဘက်တီးရီးယားပိုးကိုလက်များဖြင့်သယ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့တွင် ၂၅% သော mobi ...
လျင်မြန်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုတို့ကြောင့်လူတို့သည်မိမိတို့၏သက်သောင့်သက်သာကျန်းမာ၊ သို့သော်ထိုပစ္စည်းများပေါ်တွင်ဘက်တီးရီးယားများ၊ မှိုများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များပင်များသောအားဖြင့်ရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စ PET monofilament hydrolysis ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပါ
【ပြ【နာဖော်ပြချက် the စက္ကူလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောခြောက်သွေ့သော filter သည် PET monofilament ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအပူချိန်မြင့်မားပြီးစိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသည်။ PET filter သည် hydrolysis တုံ့ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။ PET monofilament တွင်HyMax® Anti-hydrolysis agent ထည့်သွင်းခြင်းသည်ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ကြေးနီအိုင်း antibacterial ဖိုင်ဘာကဘာလဲ?
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသတ္တုအိုင်းယွန်း antibacterial agent နှင့်အတူထည့်သွင်းထားသောပantibိဇီဝဗေဒအမျှင်များသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၏အထူးသဖြင့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအထူးကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ရည်နှင့်ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ဖိုင်ဘာနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Silver မွှားမွှားထည်သည်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသောအလုပ်လုပ်သောဖိုင်ဘာအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေမွှေးတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်ထည်ထုတ်လုပ်ရန်နည်းနှစ်နည်းရှိသည်။ နည်းတစ်နည်းမှာငွေအိုင်းယွန်း antibacterial agent ကိုထည်၏မျက်နှာပြင်သို့ပေါင်းထည့်ရန်ဖြစ်သည်၊ နောက်နည်းလမ်းမှာ dir ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ရှေးအချိန်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူများ၏အသိအမြင်သည်အတော်အတန်အားနည်းနေပြီးရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့်ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ တီဘီရောဂါနှင့်စိတ်ဝမ်းသွားရောဂါစသည့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါအမျိုးမျိုး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလူတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲမသိဘူး ...
ကူးစက်ရောဂါပြန်ဖြစ်မှု Langyi ၏ငွေအိုင်းယွန်း antibacterial အနက်ရောင်နည်းပညာသည်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှုကိုအဆင့်မြှင့်သည်
မကြာသေးမီကပင်သရဖူကပ်ရောဂါသစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုလမ်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒေသန္တရအစိုးရများသည်ကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအားဖြည့်လာသောအခါလူများသည်မိမိတို့၏ကာကွယ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လာကြသည်။ မျက်နှာဖုံးများဝတ်ခြင်းသည်အပြင်ထွက်သောအခါအခြေခံအကျဆုံးအကာအကွယ်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာဖုံးများ ... ဖြစ်လာပြီ
အဘယ်ကြောင့်ငွေအိုင်းယွန်းကြာရှည် antibacterial အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်နည်း
ငွေအမှုန်များသည်အီလက်ထရွန်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ဆုံးရှုံးသောအခါ၊ သူတို့သည်ငွေအိုင်းယွန်းများဖြစ်လာသည်။ များသောအားဖြင့်ငွေအိုင်းယွန်းများသည် valence state သုံးခုရှိသည်။ Ag +, Ag2 + နှင့် Ag3 + ။ ငွေအိုင်းယွန်းများသည်ခိုင်ခံ့ဓာတ်တိုးခြင်းဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးခေတ်မှီဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းဆေးများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငွေအိုင်းယွန်းများပါ ၀ င်သည့်ဆေးလေးမျိုးရှိပါသည်။
Polyester (PET PBT) ၏ဟိုက်ဒရိုလစ်လစ် (Solid Hydrolisis) ဖြေရှင်းချက်
Polyurethane သည်အထူးဂုဏ်သတ္တိများရှိသောပေါ်လီမာပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်များ၊ elastomers များမှအမျိုးမျိုးသောမာကျောမှု၊ စွမ်းအင်မြင့်မားမှု၊ ဝတ်ဆင်နိုင်မှု၊ တုန်ခါမှုကောင်းသောစုပ်ယူမှု၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ခုခံနိုင်မှုနှင့် Air pe များကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလက္ခဏာများပေါင်းစပ်ထားတယ်။
Anti-hydrolysis agent ၏လုပ်ဆောင်ချက်
အစိုဓာတ်သည်ပိုလီမာ၏အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်သတ္တိများကိုသက်ရောက်စေသည်။ silica gel၊ ပြုပြင်ထားသော silica gel သို့မဟုတ် isocyanate သည်ရေနှင့်လျှင်မြန်စွာဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်ကြမ်းများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သိုလှောင်နေစဉ်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူ (Moisture Scavenger) ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ခိုင်မာပြီးပုံသွင်းပိုလီမာများအတွက်, ...
လိပ်စာ: No.1 Bldg ။ , No.188 Yonghang Rd ။ , Songjiang Dist ။ , Shanghai, 201699, PRC
ငွေအိုင်ယွန်ပိုးမွှားအေးဂျင့်, ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးအပိုဆောင်း, Anti-Hydrolysis အပိုဆောင်း, ပibိဇီဝဆေးတမျိုး, ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးကိုယ်စားလှယ်, ပibိဇီဝဆေးများ,